Minimalist inotsigira yako itsva Apple Watch uye yako nyowani iPhone | Ndinobva mac
Minimalist inotsigira yako itsva Apple Watch uye yako nyowani iPhone
Pakati pekona tine Apple's Keynote, Keynote umo mavanopa iPhone nyowani uye nyowani Apple Watch 3, sekureva kwaMark Gurman. Zvirokwazvo vazhinji vanozove vateveri veiyo apple brand iyo inosarudza kutenga zvese zvigadzirwa panguva imwe chete uye kwavari seizvo zvaunenge uine shanduro dzekare dzeizvi zvigadzirwa zviviri isu tinopa rutsigiro urwu.
Iyo minimalist dhizaini rutsigiro iyo yatinogona kudzoreredza iyo Apple Watch mukuwedzera pakukwanisa kuisiya pamusoro payo sekutsigira maitiro ekutsvaga iyo iPhone zvese zviri kumusoro uye zvakatwasuka.
Yakagadzirwa neyepepuru chena epurasitiki uye grey rabha saka inovhima zvakakwana nezvose zvigadzirwa. Sezvauri kuona, iyo induction yekuchaja tambo inogona kuwanikwa mukati kukwanisa kunyatso recharge yako Apple Watch.
Kana iri iyo iPhone, nekuda kwechimiro chayo zvinotibvumidza isu kuti tishandise sekutsigira kutsvaga foni zvese kuti uisiye munzvimbo yakachengeteka uye mune yakasarudzika chinzvimbo kana iwe uchida icho kune yako tafura kana kukwanisa kunakidzwa nezviri mukati nekuisa foni panzvimbo yakatwasuka.
Mutengo wacho ndewe 9,99 euros uye inogona kushandiswa nezvose zviri zviviri 38mm uye 42mm Apple Watch pamwe neiyo 4,7 kana 5,5-inch iPhone. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve iyi hombe charger kumira ine minimalist dhizaini Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Minimalist inotsigira yako itsva Apple Watch uye yako nyowani iPhone
Mavara matsva eBeats Solo3 Wireless mahedhifoni
1wordword inovandudzwa kune vhezheni 6.8.1 ine akati wandei maficha matsva uye kugadzirisa